Ma run baa in 8 nin oo Soomaali ah ay doonta Finland ku kufsadeen haweenay? | shumis.net
Home » Layaab » Ma run baa in 8 nin oo Soomaali ah ay doonta Finland ku kufsadeen haweenay?
Ma run baa in 8 nin oo Soomaali ah ay doonta Finland ku kufsadeen haweenay?
Isbuucii hore waxay booliska Sweden iyo Finland soo xireen sideed nin oo lagu eedeeyay in ay si wadajir ah u kufsadeen haweenay 45 sano jir ah oo la socotay doonta Amorella ee u kala gooshta magaalooyinka Stockholm iyo Åbo ee Finland. Saxaafada waaweyn ee Sweden ayaa ragga kufsiga geystay ku koobay oo keliya in ay yihiin ragg Swedish ah balse wararka qaar ayaa sheegaya in dhamaan raggaas ay yihiin Soomaali oo xitaa meelaha qaarkood lagu shaaciyay magacyadooda iyo da’dooda.
Inkastoo aanan xaqiiqin karin wararka ay qoreen websiteyada Swedishka qaarkood ayaana hadana been lagu tilmaami karin, maadaama ay horay u dhacday in ragg Soomaali ah ay sanadihii dambe kufsi ka geysteen Sweden. Dhowr jeer ayaan soo qornay in Soomaali lagu xukumay xabsi kuwaasoo kufsi keystay iyadoo ay ugu dambeysay nin sanadkii hore bartamaha magaalada Trollhättan isku dayay in uu maalin cadeey ku kufsado gabar Swedish ah.
Balse haddii ay runtahay arintaan ayaa falka ay raggaan sameeyeen uu yahay mid xad dhaaf ah, iyadoo ay si wadajir ah 8 nin u qeybsadeen haweenay Swedish ah oo da’deeda tahay 45 sano jir. Raggaas ayaa ah kuwo ceeb weyn iyo magac xumo la yaab leh u soo jiiday guud ahaan Soomaalida iyo Muslimiinta. Magacyada wiilasha ay shaaciyeen websiteyada qaarkood ayaa ah kuwo dhalinyaro ah oo dhamaantood da’dooda ay ka yartahay 30 sano.
Title: Ma run baa in 8 nin oo Soomaali ah ay doonta Finland ku kufsadeen haweenay?